Rien à cirer ! - ewa.mg
News - Rien à cirer !
Cet article Rien à cirer ! est apparu en premier sur déliremadagascar.
Ataovy sotroranon’akoho re
Tsara noho ny tsy misy aloha e! Nitanatana vava ho voky, toa voron-kely miandry ny hofahanan-dreniny, ireo valalabemandry nanantena ny hidinan’ny vidin-tsolika. Dia nahitana fihenana tokoa izany saingy “sotroranon’ akoho ka izay kely azo no andrandraina”. Tsy vitsy ihany no diso fanantenana tamin’ny fampanantenana nipoapoaka tamin’ny tatitry 100 andron’ny fitondrana teny Mahamasina iny. Raha mba ny resabe re tamin’ny adihevitra teny rehetra teny dia niandrandra ny fidinana tsy latsaky ny 1000 ariary tamin’ny litatry ny lasantsy ny mpampiasa izany saingy… Ny resaka tsy atao be anie, hono, ny mamerina azy no sarotra e! Satria raha ny fampanantenana amin’ny fihenjanana tsy maintsy hampidinana ny vidin-tsolika, niampy ny faharetan’ny fotoana nifanakalozan-kevitra tamin’ireo mpandraharaha amin’ny solika dia tsy ho io Ariary zato io monja no nandrasana hilatsaka tamin’ny lasantsy. Na efa mino fotsiny ireo fampanantenana tamin’ny praopagandy sy tamin’ny fanamarihana ny 100 andro nitondrana aza ny vahoaka malagasy dia aleo tsy hipoapoakan’ny hafanam-po loatra ny fampanantenana e! Fa raha hahavita mampidina misesy sy matetika ny vidin’ny solika kosa moa aloha, arahaba soa arahaba tsara! Raha tsy izany kosa aleo ny sarety hotarihin’ny omby ihany fa aza atao eny alohan’ireo omby hitarika mihitsy. Ny tranom-pody, hono, mantsy no vitan’ny vava; ary ny bainga voavadika no tsara milaza ny asa vita. L’article Ataovy sotroranon’akoho re est apparu en premier sur AoRaha.
Anisan’ny endrika iray maneho ny fivelaran’ny zavakanto eo amin’ny firenena iray ny fahaiza-mifehy ny an’ny tena sy fahaiza-manatanteraka ny an’ny hafa. Afaka maneho izany tsara ny Bloco Malagasy sy ny Roda Malagasy. Tsy zovina amin’ny maro intsony ny Bloco Malagasy, tarika mpively ampongabe, sy ny Roda Malagasy, mpanao “capoera”. Maro ny sehatra efa nahitana azy ireo ary niavaka hatrany izany. Tsy ho latsa-danja amin’ireny ny hotanterahin’ireto tarika roa ireto, ny alakamisy alina izao, eny amin’ny Ravimpontsy eny Tsiadana. Matetika, hira mandrotsirotsy sy malefadefaka no entina manafana ny fotoana, rehefa manakaiky ny faran’ny herinandro, amin’ny toerana toy ny Ravimpontsy. Amin’ity kosa, azo lazaina ho ny mifanohitra amin’izany ny hitranga, satria feon’amponga, miaraka amin’ny dihy sady fanatanjahantena, “capoera”, no enti-mamalifaly ny vahiny. Fampisehoana sady fanentanana ny hataon’ny Bloco Malagasy sy ny Roda Malagasy, amin’io alakamisy io, araka ny nambaran’ny mpikarakara. Ny mampiavaka azy, ampifanarahina ny toerana hanaovana ny seho sy ny maha takariva ny fotoana ny famoronana entin’ny tarika roa tonta. Tanjona ny hampiaina ireo vahiny ny kolontsaina sy ny zavakanto brezilianina. Raha tsiahivina, samy sahanin’ny fikambanana Bel’Avenir, any Toliara, ny Bloco Malagasy sy ny Roda Malagasy. Iry voalohany, ahitana tovovavy marobe, izay samy nianatra ary mahafehy ny fivelesana ampongabe. Ny faharoa kosa, tarika mpanao “capoera”. Samy efa zatra sehatra ary efa nitety firenen-tsamihafa izy ireo. Landy R. L’article Zavakanto brezilianina: hanolotra seho hafa ry Bloco sy ny Roda Malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Fiampitana lalamby: notohanan’Ambatovy ny fankalazana ny aroloza
Nankalazaina, ny zoma 7 jona teo, ny Andro iraisam- pirenena ho an’ny aro loza amin’ny fiampitana lalamby. Nikarakara azy ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny famantarana ny toetr’andro ary nanohana ny hetsika ny tetikasa Ambatovy. Nisy ny fampisehoana ny fomba hisorohana ny loza amin’ireny fiampitana lalamby ireny. Nambaran’ny tompon’ andraikitry ny fiarovana ao amin’ny tetikasa Ambatovy, i Nicolas Alexandre Rogowski, fa ilaina entanina ny fiarahamonina sy ny mpampiasa lalana, hatrany an-tsekoly, hamantaran’izy ireo ny tokony hatao rehefa hiampita lalamby (passage à niveau) ireny. Nilaza ny talen’ny fampiroboroboana ao amin’ny Madarail, fa mahatratra 5 ka hatramin’ny 10 isan-taona ny lozam-pifamoivoizana amin’ny lalamby. Tena ahitana azy ny zotra Antsirabe- Antananarivo- Toamasina ary Ambatondrazaka. Ho an’ity farany, maty voahosin’ny fiaran-dalamby nitatitra kraoma ny mpandeha rehetra tao anaty fiara fitaterana.Sajo L’article Fiampitana lalamby: notohanan’Ambatovy ny fankalazana ny aroloza a été récupéré chez Newsmada.
FLM Ivato Famonjena: nanamarika ny 20 taony ny Akon’ny lanitra
Tsy nahasakana ny fiderana an’Andriamanitra sy ny fitoriana ny filazantsara ny orambe, nitranga omaly tolakandro, teto an- dRenivohitra. Tetsy Antsahamanitra, vory lanona ny maro, niara-nanandra-peo nanome voninahitra ny Tompo noho ny fahasoavana natosany, indrindra tamin’ny Akon’ny lanitra, antoko mpihira ao amin’ny fiangonana loterana malagasy (FLM) Ivato Famonjena. Nanamarika ny 20 taona nijoroany izy ireo, nandritra ity taona 2018 ity. Marobe ny hetsika efa tontosa, nentina nanasongadinana izany sy ho fiderana an’Andriamanitra. Hetsika famaranana kosa, ny omaly tolakandro, tetsy Antsahamanitra, nanatontosana ity antsan-kira fiderana ity. Tsy nandeha irery fa notronin’ny antoko mpihira telo ny Akon’ny lanitra tamin’izao fitoriana filazantsara lehibe izao. Samy nitondra ny anjara birikiny sy naneho ny hakanton’ny talenta nomen’Andriamanitra azy amin’ny hira ny KT Ambatovinaky sy ny Kerobima Ankatso ary ny Tanora 67ha. Tao anatin’izay 20 taona nijoroany izay, efa anjatony ny mpikambana nandalo tao amin’ny antoko mpihira Akon’ny lanitra. Tsy sampana midera an-kira fotsiny izy fa mitaiza ara-panahy ireo mpino mpikambana ihany koa. “… Fa Kristy no zavatra rehetra sady amin’ny rehetra”. Io tenin’Andriamanitra, ao amin’ny Kolosiana 3: 11b, io no nentin’ny Akon’ny lanitra nanamarika izao tsingerin-taona niorenany izao. Landy R.L’article FLM Ivato Famonjena: nanamarika ny 20 taony ny Akon’ny lanitra a été récupéré chez Newsmada.
Ady amin’ny dahalo :: Manao fanamby goavana ny minisitry ny Fiarovam-pirenena
Nidina tany amin’ny Faritra Bongolava ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny jeneraly Rakotonirina Léon Richard, nanatitra ireo miaramila efajato, tamin’ny faran’ny herinandro teo. Ankoatra ny ady amin’ ny dahalo dia hanampy ny mponina ao amin’ny Faritra Bongolava, Melaky ary Itasy, amin’ny asa sosialy, toy ny fitsaboana, fanamboarana lalana, fambolena hazo sy ny maro hafa ireo tafika ireo, araka ny fantatra. Sahy nanao fanamby goavana amin’ny famerenana ny fandriampahalemana ao anatin’ny fotoana fohy ny minisitra. “Manome toky anareo aho fa tsy ho ela dia hilamina ity faritra ity. Tsy maintsy ho tratra ny vina napetraky ny Filohan’ny Repoblika ny amin’ny hampi -henana na tsy hampisy intsony ny halatr’omby ato anatin’ ny fotoana fohy. Koa miantso fiaraha-mientana amintsika rehetra aho mba ho tratra izany tanjona fandriampaha- lemana maharitra izany aty amintsika. Matetika mantsy dia olana avy amin’ny fiarahamonina ihany no mahatonga azy ireny. Ireto miaramila apetraka aty ireto dia tsy hifidy tany hiasana. Amin’ireo toerana tsy tongan’ ny fiara no tena hidiran’izy ireo hamaky ireny kizo fitsoahan’ny dahalo ireny”, hoy hatrany ny minisitry ny Fiarovam-pirenena. Tamin’ity diany tany Bongolava ity ihany koa no nahafantarana fa ho apetraka tsy ho ela any amin’ny faritra andrefan’i Madagasikara, atsimo atsinanana ary atsimo Andrefana ireo sambo mpiady an’ny Tafika. “Ankoatra ny fanaraha-maso ny sisin-tany dia hanampy ireo mpanjono madinika hiaro ny harena an-dranomasina ireo sambo ireo”, hoy izy. L’article Ady amin’ny dahalo :: Manao fanamby goavana ny minisitry ny Fiarovam-pirenena est apparu en premier sur AoRaha.
1/8-N-dalana: nitondra mpisikidy ny Kongoley
Nahoraka be, any Egypta efa ho andro vitsivitsy izay taorian’ny nahatafakatra azy, eo amin’ny ampahavalon-dalana, ny fahatongavan’i Evoloko, any Egypta. Tsy iza izy io fa ilay mpisikidy raindahiny, any Kongo. Nohafaran-dry zareo Kongoley mihitsy ity mpisikidy gagilahy ity hanao fanafody, tamin’ny lalao nikatrohan’ny Leopard-n’i Kongo, tamin’ny Barean’i Madagasikara.Mandoro lamba sy dinti-kazo ary mitsoka anjomara no nataony, talohan’ny fihaonana, omaly. Ny nahavariana, tsy mba eny amin’ny “gradin”, na eny amin’ny toeran’ny mpijery no nanaovany izany, fa teny ambony kianja mihitsy. Amin’ny lalao goavana iraisam-pirenena tahaka izao, asa na azo atao izany na tsia, fa maro no nametra-panontaniana.Miravaka karazam-barahina ihany koa izy, ary mivavaka amin’ny tapa-kazo maro tao anaty kianja filalaovana. Marihina fa tsy vao izao akory no malaza amin’ity fampiasana an’ingahy Evoloko ity ry zareo Kongoley fa efa hatramin’izay. Tsy amin’ny ekipam-pirenena ihany fa hatramin’ireo klioba miatrika ny fiadiana ny ho tompondaka sy ny ho tompon’ny amboaran’i Afrika ihany koa aza. “Mety ho izany angamba”, hoy ny sasany, no mahamafy be an-dry zareo Tout Puissant Mazembé. TompondakaL’article 1/8-N-dalana: nitondra mpisikidy ny Kongoley a été récupéré chez Newsmada.
Misy ny marina, misy ny ara-dalàna, dia misy ihany koa ny lôjika eo amin’ny tontolo politika. Mila mianatra mivoaka amin’ilay toe-tsaina be fanankianana lava na manohanohana fahatany arakarak’izay mpitondra eto amin’ny firenena isika. Tsy hoe rehefa olona notohanana no lany dia fotsy daholo izay miseho rehetra, na rehefa tsy ilay kandida antsika dia mainty avokoa ny sary mipoitra. Tsy tokony hiteraka resabe hatraiza izao fanapahan-kevitry ny fitondrana Rajoelina hiroso amin’ny fitsapan-kevi-bahoaka momba ny fanitsiana an’ireo andininy sasantsasany amin’ny Lalàm-panorenana izao. Na ingahy Ravalomanana aza no lany teo, inoana fa tsy nandeha an-jambany tamin’io Lalàm-panorenana narafitra sy nolaniana tamin’ny tetezamita io izy. Mahagaga aza raha izao vao sahy niroso tamin’ny fanatanterahana fitsapan-kevi-bahoaka ny fitondrana. Angaha azo vitavitaina amin’izao izany fanafoanana ny Antenimierandoholona izany, na ny fanomezam-pahefana feno an’ireo mpitantana ny faritra, eny fa na ireo fepetra goavana hitondrana fanovàna eto amin’ ny firenena aza dia mila ny fanitsiana ny Lalàm-panorenana. Ohatra akaiky izay malaza ankehitriny ny finiavana hanenjika an’ireo mpitondra nandika lalàna teto amin’ny firenena nefa toa voaelingelin’ity fangatahana alalana amin’ny Antenimierampirenena ity mialoha ny handraisan’ny Fitsarana manokana HCJ ny adidy sy andraikiny. Na ilay andininy faha-54 nahabe savorovoro mandrak’ity ny androany aza dia mila amboarina mba hifanojo kokoa amin’ny vinam-pampandrosoana fa tsy hifantoka loatra amin’ny kajikajy politika. Santionany ihany ireo fa ny fehiny dia manaraka an’ilay fomba fiteny hoe: miova andriana miova sata. Fitsapan-kevi-bahoaka no hatao. Anjaran’ireo antoko politika no mandresy lahatra ny vahoaka ny amin’ny mety sy tsy mety ka hampandany na tsia an’izay volavolam-panitsiana ny Lalàm-panorenana ho avy eo. Samia miaro ny lôjika politikany nefa aoka hiaro mandrakariva ny tombontsoan’ny vahoaka sy ny firenena. L’article Lôjika politika est apparu en premier sur AoRaha.
Fenoarivo Atsinanana: MD ny mpiambina farmasia nangalatra fanafody
Miezaka manova mankany amin’ny tsara ireo mpitantana eo anivon’ny Hopitalibe ao Fenoarivo Atsinanana amin’izao fotoana izao. Ny volana jona lasa teo, nahatsikaritra ny mpiandraikitra ny farmasia ao an-toerana fa misy fahabangana ny fanafody ao amin’ny farmasia. Ny trano anefa, tsy vaky nefa ny fanafody, nahitana fahabangana. Mitentina 12 tapitrisa Ar ny fanafody very tao amin’ny farmasia, araka ny fampitam-baovao voaray avy ao amin’ny Hopitalibe. Voarohirohy avy hatrany ny mpiambina ary nanaiky fa izy no nangalatra sy nivarotra amin’ny mpivarotra fanafody iray ao Soanierana Ivongo ireo fanafody avy ao amin’ny farmasian’ny Hopitalibe. Noraisim-potsiny tany Soanierana Ivongo ihany koa ilay mpivarotra halatra fanafody. Mbola hita tao an-tranony nandritra ny fisavana nataon’ny mpitandro filaminana ireo fanafody marobe. Ny sasany izay mbola tanaty baoritra misy soratra hoe Hopitalibe Fenoarivo Atsinanana. Nosamborina ilay mpivaro-panafody sy ilay mpiambina farmasia ka natolotra ny fampanoavana avy hatrany izy ireo taorian’ny famotorana ka naiditra vonjimaika am-ponja (MD) ao amin’ny fonjan’i Fenoarivo Atsinanana.Sajo sy J.C L’article Fenoarivo Atsinanana: MD ny mpiambina farmasia nangalatra fanafody a été récupéré chez Newsmada.
Voatazona am-ponja vonjimaika ny lehilahy iray mpiambina amin’ny hopitaly sy olona iray hafa voarohirohy ho nangalatra fanafody tao amin’ny hopitaliben’ i Fenoarivo Atsinanana, tamin’ ny volana jona lasa teo. Voatondro ho mangalatra ny fanafody amidy ao amin’ny fivarotam-panafody ilay mpiambina. Nitazona izany kosa ny olona iray mipetraka any Soanierana Ivongo. L’article Halatra fanafody est apparu en premier sur AoRaha.
Ampanefena: zazakely novonoina tamin’ny fomba feno habibiana
Nampihoronkoditra! Fatin-jazakely eo amin’ny fito na valo volana eo ho eo ny hita faty novonoina tamin’ny fomba feno habibiana tao amin’ny fokontany Ampanefena Avaratra, Vohémar. Araka ny fampitam-baovao voaray, omaly, nisy renim-pianakaviana iray niantso ny lefitry ny ben’ny Tanàna ao Ampanefena nilaza fa misy fatina zazakely ao amin’io fokontany io. Teo no ho eo ihany, nidina tany an-toerana ny lefitry ny ben’ny Tanàna niaraka tamin’ny kaomandin’ny borigadin’Ampanefena niaraka tamin’ny dokotera nizaha ny razana. Nandritra ny fizahana nataon’ny dokotera no nahitana fa ny tapany ambany amin’ilay zaza ihany sisa hita manomboka eo amin’ny valahany no ho midina. Tsy fantatra mazava hoe zanak’iza marina ity zazakely hita faty ity. Niantso ny fokonolona avy hatrany ny manam-pahefana ao an-toerana ka noraisin’ny eo anivon’ny kaominina an-tanana ny fandevenana ilay razana, omaly ihany. Mitohy, araka izany, ny fanadihadiana amin’izay mety ho tompon’antoka amin’izao vonoan’olona izao.J.C L’article Ampanefena: zazakely novonoina tamin’ny fomba feno habibiana a été récupéré chez Newsmada.
Ifantohana manokana miaraka amin’ny Banky afrikanina momba ny fampandrosoana (Bad) ny fampiroboroboana ny fambolena ao amin’ny lemaka Bas Mangoky. Ankoatra ny fanatsarana ny fotodrafitrasa, nentina any an-toerana ny vokatry ny fikarohana karazam-bary.Tafiditra ao anatin’ny tetikasa Priaso (1) ny fikarohana karazam-bary mety any amin’ny faritra Atsimo Andrefana. Ny herinandro lasa teo, niarahana tamin’ny tantsaha mpamboly amin’ny lemaka Bas Mangoky, ny vokatry ny fikarohana. Nisy karazam-bary 18, ka 14 ny avy amin’ny Africarice ary efatra ny avy amin’ny Fofifa. Nomena sehatra malalaka hisafidy amin’izay mety aminy na PVS (2) ny tantsaha, hanatsara kokoa ny vokatra raha oharina amin’ny efa fanao tany aloha.Raha eo anivon’ny Africarice, firenena maro aty Afrika ny efa nitondrana izany nanomboka tamin’ny fanaovana andrana, misy maharitra telo taona, tonga amin’ny fambolena karazam-bary mifanaraka amin’ny toe-tany sy ny toetr’andro, hatramin’ny fomba amam-panaon’ny mpamboly. Toy izany koa ny atao any amin’ny lemaka Bas Mangoky.Tonga any an-toerana ny teknisianina avy ao amin’ny minisiteran’ny Fambolena nampiofana sy nampahalala ireo tantsaha momba ireo karazam-bary ireo. Momba izay safidy izay indrindra, nampahalalana azy ireo ny dingana natao momba ny fikarohana mialoha izao fanaparihana azy izao.Atao izay hahamora ny fanapariahana sy ny handraisan’ny tantsaha azy, koa raha hita ny fahombiazana amin’ny taom-pambolena fampiharana azy, hatao izay hanatevenana azy hahazoana masomboly vaovao ho an’ny taom-pambolena manaraka. Hampahafantarana ny sampam-pikarohana ihany koa izay karazam-bary nahitana fahombiazana teo amin’ny vokatra.Tanjona ny hahazoam-bokatra 10 t/haTanjona ny hahazoam-bokatra 10 t/ha, efa vitan’ny tany Afrikanina sasany (Gabon, ohatra), any amin’ny lemaka Bas Mangoky, manomboka amin’ny fanajariana ireo fotodrafitrasa, tonga amin’izao teknika vaovao izao. Fianakaviana iray alina mahery ny mahita tombontsoa any an-toerana. Tohanan’ny Bad amin’ny famatsiam-bola ny lemaka Bas Mangoky nefa tsy any ihany ny faritra mpamboly vary eto amin’ny Nosy mila tosika amin’ny lafiny maro. Ny fanjakana koa moa, zatra miandry famatsiam-bola avy any ivelany. R.Mathieu Piaso (1) : Projet de réhabilitation des infrastructures agricoles de la région Sud-OuestPVS (2) : Sélection variétale participativeL’article Lemaka Bas Mangoky: nomena hisafidy karazam-bary volena ny tantsaha a été récupéré chez Newsmada.
Sambava : Zazavavikely 2 taona narian-drainy teny amoron-dalana
Zazavavikely sahabo ho roa taona eo no nisy nanary teny amoron-dalana, afak’omaly tolakandro, tao amin’ny fokontany Antaimby, an-tampon-tanànan’i Sambava. Raha ny vaovao voaray, dia taitra ireo mpiantsena tao Antaimby raha nahita an’ity zaza nitsirara natory tamin’ny tany, ka vory ny olona nijery, ary tao anatin’izany no nisy nahafantatra ny anaran’ny ray aman-drenin’io zaza nisy nanary io sy ny adiresiny. Nampahafantarina ny Polisy tao amin’ny Kaomisaria Sambava Centre ny zava-misy, ary nentin’ireo olona tsara sitrapo teny amin’ny hopitalibe Besopaka kosa ilay zaza, saingy tsy nahitana soritr’aretina izy, hoy ny mpitsabo, ka nasaina niverina. Nony hariva ny andro, nipoitra teny amin’ny biraon’ny Polisy ny renin’ity zaza, ary nanazava tamin’ny mpitandro filaminana, fa tsy nanary anaka izy, fa « noho tsy fandraisan’ny rain-janako andraikitra amin’ity zaza tsy salama, dia voatery nomeko azy ilay zaza raha sendra nifanojo teny an-tsena izahay, kinanjo dia nilaozany io zanakay io », hoy Rtoa Noé mipetraka ao Antanifotsy Sambava. Eric ManitrisaL’article Sambava : Zazavavikely 2 taona narian-drainy teny amoron-dalana a été récupéré chez Midi Madagasikara.